घरभित्रै मनाइँदै चैती छठ- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
घरभित्रै मनाइँदै चैती छठ
चैत्र १७, २०७६ श्यामसुन्दर शशि
(जनकपुर) — कोरोना भाइरसको त्रासले यो वर्ष चैती छठ पर्व यहाँका श्रद्धालुहरुले घरभित्रै मनाउँदै छन् । चार दिवसीय यो पर्वको आज (सोमबार) तेस्रो दिन सोमबार सन्ध्याकालीन सूर्यको पूजा घर–घरमै गरिँदैछ ।
सन्ध्याकालीन अर्घ्यका दिन जनकपुरको गंगासागरमा हजारौं व्रती तथा श्रद्धालुको घुइँचो लाग्ने गर्थ्‍यो । यसपालि त्यो घुइँचो देख्न पाइन्न । गंगासागर नजिकका केही परिवार भने सामाजिक दूरीलाई पालना गर्दै सन्ध्याकालमा त्यही पुग्ने बताएका छन् । ‘ नजिकैका केही परिवार गंगासागर घाटमै जाने तयारी गर्दैछन् ’ शिवचोकका वीरेन्द्र साहले भने ।
गत शनिबार नहायखायसँगै सुरु यो पर्वको दोस्रो दिन आइतबार षडना थियो भन्ने मंगलबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य प्रदान गरी चार दिवसीय छठ पर्व सम्पन्न हुनेछ ।
कार्तिकमा आयोजना हुने शारदीय छठ होस् या चैतमा मनाइने वासन्ती छठ, यस पर्वको तयारी साता अघिदेखि नै सुरु हुने गर्छ । घरघरबाट छठ गीतको निरझरनी प्रवाहित हुने परम्परा छ । छठ पूजामा प्रसादको रुपमा प्रयोग हुने केला, नरिवल, ऊखु, नेवुआ, बेसारलगायत सामयिक फलफूलको पसल चोकचोकमा सञ्‍चालन हुन्छ । बाँसबाट निर्मित ढाकी, कनसुपती, चलनी, नांग्लो तथा माटो मिर्मित कोसिया, दियौरी लगायतका सामग्री बाजार यत्र तत्र देख्न सकिथ्यो । तर, कोरोना भाइरसका कारण यी सामग्रीहरु श्रद्धालुहरुले खरिद गर्न पाएनन् । जनकपुरस्थित पुरानो पेठिया बाजारमा भने छठ पूजाका सामानहरु थोर बहुत् पाइए पनि लकडाउनका कारण त्यहाँ जानै पाएनन् ।
‘पर्व त्यौहार श्रद्धाको विषय हो । यस विकट परिस्थितिमा पनि छठ पर्व मनाउनै पर्यो । अब छठ मैयाले नै यस व्याधिको समाधान गर्नु हुन्छ ’ ६० वर्षीया व्रतालु ललिता साहले भनिन् । छठ व्रतको आयोजना पवित्र जलाशयहरुको घाटमा गर्ने परम्परा भए पनि जलाशय नभएका स्थानवासीहरुले समेत व्रत बसेको तथ्य गीतहरुमा वर्णित छ ।
‘अंगनामे पोखरी खुनाएव , छठी मैया औतीह आई ...’
यो गीतको भाव हो–आज छठी मैयाको व्रत छ । छठी मैयाको आगमन हुन्छ । उनको स्वागतमा आँगनमै पोखरी खन्ने छौं । आँगनमै भए पनि छठ पर्वको आयोजना गर्नेछौं ।
आँगनमा पोखरी खन्नु सम्भव नभए पनि श्रद्धालुहरु आफ्ना आँगन वा दलानमा सानो जलाशय (डवरा) खनेर वा घरको छतमा ठूलो भाडोमा पानी भरेर पनि छठ पूजा गर्ने चलन छ । पोखरीको आभाव हुने पूर्व—पश्चिम राजमार्ग छेउ छाउका श्रद्धालुहरु ईनारकै वरिपरि छठ मान्ने गरेको अनेकौ उदाहरण पनि भेटिन्छ ।
‘छठ मिथिलाञ्चलको लोक पर्व हो । यस पर्वमा विधि विधानभन्दा पनि पवित्र भावना महत्वपूर्ण हुन्छ । पर्व पोखरीमा मनाए पनि, घरमै पानी राखेर मनाए पनि हुन्छ’ पण्डित बिन्धनाथ झाले भने ।
जनकपुरकी चेलीबेटीहरु चैती छठ मान्न माइती आउने गरेकी थिइन् । तर यस वर्ष नेपाल र भारत दुबैतिर लकडाउन गरिएको कारण चैती छठी निरस भएको उमेश साहको कथन छ । ‘असाध्य रोगबाट मुक्तिको लागि छठ पर्वको आयोजना गरिन्छ । यस वर्षको छठ पर्व वैश्विक रुपमा महामारीको रुप लिई सकेको कोरोनाबाट मुक्तिको लागि गर्दैछौं ’ उनले भने ।
प्रकाशित : चैत्र १७, २०७६ १७:०२
दुई हजारको राहत लिन पाँचथरी फोटोकपी !
नागरिकताको फोटोकपी, घरको नक्सापास, खानेपानी तथा विद्युत् महसुल तिरेको बिल वा घरबहाल सम्झौतापत्रको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने
चैत्र १७, २०७६ दीपक परियार
पोखरा — लकडाउनबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई लक्ष्य गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले दुई करोड रुपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत पाँच जनाको एक परिवारले दुई हजार रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री पाउनेछन् । राहत लिने प्रक्रिया भने निकै झन्झटिलो छ ।
निवेदकले एक पानाको फारम भर्नुपर्छ । निवेदकको फोटो बुझाउनुपर्छ । पाँचथरी फोटोकपी बुझाउनुपर्छ । निवेदनसँगै नागरिकताको फोटोकपी, घरको नक्सापास, खानेपानी तथा विद्युत् महसुल तिरेको बिल वा घरबहाल सम्झौतापत्रको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने नियम महानगरले बनाएको छ । जबकि लकडाउनले न फोटो खिच्ने ठाउँ खुला छ न त फोटोकपी गर्ने ।
दैनिक ज्यालादारीबाट गुजारा चलाउँदै आएका न्यूनतम पाँच जनाको परिवारलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने निर्णय सोमबार महानगरले गरेको हो । यो योजनाबाट महानगरले भनेजस्तो अतिविपन्न, सुकुम्बासी, श्रमिक लाभान्वित हुने सम्भावना कम भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
राहत माग फाराम । तस्बिरः कान्तिपुर
पोखराको सिर्जनाचोकमा भाडामा बस्दै आएका ट्र्याक्टर चालक रमेश बास्तोला यो योजनाबाट पोखरामा घर भएका मात्रै लाभान्वित हुनसक्ने बताउँछन् । ‘आफ्नै घर भएकाले मात्रै यी कागजपत्र बुझाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘घर भएकालाई भन्दा भाडामा बस्नेलाई राहत चाहिएको छ । दिनभरि बालुवा चालेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्नेले कहाँबाट ल्याउने यत्रो कागजपत्र ?’
महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी भने वडामै फोटोकपी गर्ने व्यवस्था भएकाले झन्झटिलो नहुने बताउँछन् । ‘यो योजना महानगरवासीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘महानगरवासी भन्ने एउटा प्रमाण त चाहियो नि ! भोलि खरिद ऐनले समात्ला ।’ महानगरवासी भोकै नमरुन् भन्ने उद्देश्यले योजना ल्याइएको उनले बताए । ‘अन्यत्रकाले राहत नलिउन् भन्न यस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार त्यस्ता परिवारको लगत संकलन टोल विकास समितिले गर्नेछ । पीडित परिवारले फारम भरेर आवश्यक कागजातसहित समितिलाई बुझाउनुपर्छ । वडाका जनप्रतिनिधिले लगत रुजु गर्नेछन् । प्रमाणित परिवारलाई वडा कार्यालयले टोकन दिनेछ । त्यही टोकनका आधारमा उनीहरूले आफूलाई पायक पर्ने पसलमा गएर सामान लिन सक्नेछन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघसँग महानगरले समन्वय गरेको छ ।
प्योकजमा २५ केजी चामल, दुई केजी दाल, एक केजी नुन, एक लिटर तेल, एक केजी गेडागुडी दिने उल्लेख छ । सोमबार र मंगलबार तथ्यांक संकलन गरी बुधबारबाट राहत वितरण हुनेछ । पाँच जनाको परिवारलाई न्यूनतम १० दिनलाई पुग्ने गरी राहत प्याकेज बनाएको महानगर प्रमुख जीसीले बताए । ‘थोरै भए पनि राहत पुगोस् भन्ने हिसाबले प्याकेज घोषणा गरेका हौं,’ उनले भने, ‘दिनभरि काम गरेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्नेलाई यसले सहयोग पुग्छ ।’
महानगरले सोमबार र मंगलबार प्रत्येक टोलमा खाद्यान्न बिक्री केन्द्र तय गर्ने भएको छ । त्यहीँबाट ग्राहकले दैनिक उपभोग्य सामग्री लिन पाउनेछन् ।
प्रकाशित : चैत्र १७, २०७६ १६:५५